Phatha kalula ama-Brands amaningi ngokufana ne-Multi-Brand
Izici » Imikhiqizo eminingi
Qalisa ngaphezu komkhiqizo owodwa kusuka ekungeneni ngemvume okukodwa, dala amawebhusayithi amaningi, futhi uphathe kalula konke ndawonye.
Abaphathi bokuqasha amaholide noma opharetha abahlala emisebenzini enamakhulu noma izinkulungwane zamayunithi, kanye nabanikazi bamaketanga amahhotela, badinga njalo ukusebenzisa imikhiqizo eminingi. Leli su kungenzeka ngenxa yentuthuko yomlando efana namacala we-M & A enkampanini yabo, noma isidingo sokukhomba izingxenye ezahlukahlukene zemakethe ngokwehlukana.
Kwesinye isikhathi, imakethe yokuncintisana iphoqa izinkampani ukuthi zibe necebo lokumaketha kaningi. Ukusebenza kule makethe, isikhathi esiningi kunzima ukwanelisa amakhasimende ngohlobo olulodwa kuphela. Ngakho-ke, udinga ukukhomba izingxenye ezahlukahlukene zokumaketha ngemikhiqizo eminingana.
Kunobuhle nobubi obuza ngokufaka uphawu oluningi. Izindaba ezimnandi ukuthi, ngokuba naleli su, amabhizinisi ahlukene angalawula izimbangi zawo futhi azizwe ephephile emakethe. Ukuba necebo lemikhiqizo eminingi kungaqinisekisa ukuthi ulawula imakethe, hhayi izimbangi zakho.
Njengomnikazi webhizinisi uwuqonda ngokuphelele umqondo wokwethembeka komkhiqizo futhi akungabazeki ukuthi usebenzisa lo mqondo kucebo lakho lemikhiqizo eminingi. I-Zeevou iyindlela eshelelayo futhi elula yokugcina phezu kwalokhu bese ubeka imakethe ngayinye yemikhiqizo yakho ethile.
Ukugcina wonke ama-akhawunti akho ngaphansi kohlelo olulodwa lwe-PMS kuzokongela isikhathi esiningi namandla okwazi ukuguquguquka uye emuva kunokungena nokungena kuma-akhawunti ahlukene.
Ukusebenza eqenjini elikhulu, ukusabalalisa ukungena ngemvume nokukhathazeka ngokuthola imininingwane ethile nakho kungaba yinselele futhi kunezinkinga zokuphepha ezingaba khona. NgeZeevou ungakugcina konke endaweni eyodwa futhi unikeze amazinga wokufinyeleleka.
Ngabe Usizo lweZulvou's Multi-brand Solution lungasiza kanjani?
Konke-in-one kukaZeevou Uhlelo Lokulawulwa Kwezakhiwo, Umphathi wesiteshi, I-Booking Engine / Website Creator, ne-Task Management Hub ifuna ukunikela ngesixazululo sebhizinisi esisezingeni eliphakathi nendawo kumabhizinisi amakhulu wokungenisa izihambi ezindaweni ezinjengezimenenja eziqashisayo zaseholidini, opharetha bamafulethi asetshenzisiwe, noma abanikazi bamaketanga amahhotela.
Siyaqonda ukuthi kungasiza kanjani ukuphatha imikhiqizo eminingana. Futhi kubaluleke kangakanani ukukwazi ukungena ngemvume okukodwa okukuvumela ukuthi ungaphathi kuphela izakhiwo ezindaweni eziningi, emadolobheni, noma emhlabeni jikelele emazweni amaningi. Sikwazisa ngokugcwele ukubaluleka kokukwazi ukusebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene ngokufana futhi siziphathe sisebenzisa isisekelo sabasebenzi esabiwe. Njengalokhu, isici semikhiqizo eminingi singumnyombo we ZeevouUkwakhiwa kwesistimu. Lesi sixazululo sivumela abaphathi nezinkampani zokuphathwa kwempahla ukuthi zenzele imikhiqizo engenamkhawulo enkampanini yabo, icacise uhlobo lomkhiqizo oluzenzakalelayo lwendawo ngayinye, futhi zithengise phakathi kwemikhiqizo ngokuthanda kwakho nalapho uthanda khona.
Ngakho-ke, bazoba nenzuzo ethe xaxa futhi bahlukanise izici ezahlukahlukene zebhizinisi labo ukuze baziphathe ngawodwana kodwa ngokufana. KwaZeevou, ungasebenzisa isici semikhiqizo eminingi ukuze ube nezinzuzo ezihlukile zesu lokufaka uphawu lokufaka uphawu futhi usebenze kahle.
Lesi sici sikuvumela ukuthi uhlukane amawebhusayithi aqondile wokubhuka ngenjini yokubhuka eyakhelwe ngaphakathi nokusebenza kwe-blog, nokuqinisekisa ukuthi isipiliyoni sezivakashi ifakwe uphawu ngokuphelele ngokuya ngomkhiqizo ozenzakalelayo.
UZeevou uzonakekela ama-imeyili aphumayo futhi adonse ama-logo nemininingwane yokuxhumana ngokusho komkhiqizo ofanele. Futhi, amakheli e-imeyili angenayo amaningi angalawulwa kalula ngokusebenzisa yethu ibhokisi lokungenayo elihlanganisiweisici sokudlulisa imeyili esingenayo. Ngokusebenzisa isici semikhiqizo eminingi enikezwa nguZeevou, ungaba nethuluzi elilodwa lokuphatha imikhiqizo eminingana ngokufanayo futhi ugcine imininingwane yakho ihleleke ngokuphelele.
Xhumana nathi ukusetha a DEMO - ake iqembu lethu likubonise amandla eZeevou Multi-Brand namuhla!